ချောင်နေတဲ့ အိမ်သာထိုင်ခုံကို ဘယ်လိုကြပ်မလဲ - ONE DAILY MEDIA
မင်္ဂလာပါ။One Daily Pageမှ ကြိုဆိုပါတယ်။အိမ်သာထိုင်ခုံတွေကလည်း ထပ်ခါတလဲလဲလှုပ်ရှားမှုနှင့် နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုတွေ စတဲ့ အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ချောင်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကို ဖြေရှင်းရတာလည်း အလွန်စိတ်ရှုပ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါပဲ။
ဒါ့ကြောင့် ဒီတစ်ခါမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ပေ့ခ်ျကနေ အိမ်သာထိုင်ခုံ ကြပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကို ပြောပြပေးသွားပါမယ်။
လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းကိရိယာတွေကတော့ ဝက်အူလှည့် ၊ ပလာယာ နှင့် ဂွတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နည်းလမ်း(၁) မြင်သာတဲ့ bolts တွေနှင့် အိမ်သာထိုင်ခုံတွေ
အဆင့် 1. ထိုင်ခုံနောက်ဘက်ရှိ ပတ္တာထုပ်များကို ဖွင့်ပါ။လိုအပ်ပါက ဝက်အူလှည့်ဖြင့် တွန်းဖွင့်ပါ။
အဆင့် 2. ရှေ့ဆက်မသွားမီ ထိုင်ခုံကို အိမ်သာဇလုံနှင့် ချိန်ညှိထားကြောင်း သေချာပါစေ။
လိုအပ်ပါက လိုက်လျောညီထွေရှိ၊ မရှိ သိရှိနိုင်ဖို့ အခြားသူတစ်ဦးအား အကူအညီတောင်းပါ။
အဆင့် 3. အိမ်သာဇလုံအောက်ရှိ nut ကိုရှာပါ။
အဆင့် 4. ဝက်အူလှည့်ဖြင့် နာရီလက်တံအတိုင်း ဦးတည်ကာ ထိပ်ပေါ်ရှိ nutကို တင်းကျပ်ပါ။
အဆင့် 5. လုံးဝတင်းကျပ်ကြောင်းသေချာစေဖို့ ထိုင်ခုံကိုစစ်ဆေးပြီး ပတ္တာထုပ်များကို ပြန်တပ်ပါ။
နည်းလမ်း(၂) မမြင်သာတဲ့ bolts တွေနှင့် အိမ်သာထိုင်ခုံတွေ
အဆင့် 1. ထိုင်ခုံကိုဖယ်ရှားဖို့ လွှတ်တင်တဲ့ ခလုတ်ကိုရှာပါ။ ပြီးရင် ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
အဆင့် 2. ဘော့လုံးပေါ်ရှိ အဖုံးများကို ဖြုတ်ပါ။ ဝက်အူလှည့်ဖြင့် တွန်းထုတ်နိုင်ပါတယ်။
အဆင့် 3. ဝက်အူလှည့်ဖြင့် ဘောများကို ကြပ်ပါ။ nutတွေကို ရှာတွေ့ဖို့အိမ်သာဇလုံအောက်ကို ကြည့်လိုက်ပြီး ကျည်တွေကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဖိထားပါ။
အဆင့် 4.အဖုံးနှင့် ထိုင်ခုံကို ပြန်တပ်‌ေပးလိုက်ပါ။